Antony 5 hampiakaran'ny mpivarotra B2B bot miaraka amin'ny paikadim-barotra nomerika | Martech Zone
Ny internet dia mamaritra mora foana ny botika ho fampiharana rindrambaiko izay mitantana asa mandeha ho azy ho an'ireo orinasa amin'ny Internet.
Efa hatry ny ela ny botika no efa nisy, ary nivoatra tamin'ny taloha. Ny bots izao dia asaina manao lahasa maro isan-karazany ho an'ny lisitry ny indostria maro karazana. Na inona na inona fantatsika ny fanovana na tsia, ny bots dia ampahany lehibe amin'ny marketing mix amin'izao fotoana izao.
Ny bot dia manome vahaolana mifanentana amin'ireo marika mitady hampihena ny vidiny ary hanatsara ny fahombiazany. Rehefa ianao manomboka orinasa an-tserasera ary miditra amin'ny varotra nomerika, mety hiafara amin'ny fandanianao vola be kokoa amin'ny doka, fampiroboroboana, fivarotana ary fanehoan-kevitra noho ny tokony ho izy ianao. Bots dia mora vidy tokoa raha apetraka ary azo alamina mora foana.
Noho ny tombontsoany sy ny tombony farany, ny bots marketing dia endrika malaza iray mandeha ho azy ho an'ny mpivarotra amin'izao fotoana izao. Ny bot no tena kilalao varotrao manokana izay azo alamina hanatanterahana izay asa tadiavinao amin'izy ireo.
Ny lesoka ataon'ny olombelona dia hahena ary ny fiasa mahomby amin'ny famantaranandro dia azo antoka amin'ny alàlan'ny fampiasana bot.
Ianao ve mitady fomba hametrahana automatique ny fampielezankevitra nomerika anao ary hampihena ny lesoka?
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny tombontsoa azon'ny bots atolotra ve ianao?
Raha eny dia eo amin'ny pejy tsara ianao.
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mijery ny fomba mety hanarahan'ny mpivarotra B2B hampiditra bot ao anatin'ny paikadim-barotra nomerika.
Vakio manontolo ity lahatsoratra ity ary fantaro ny modus operandianao amin'ny ho avy mahomby sy lafo vidy.
Antony 1: Mampiasà Bot ho fitaovana hifandraisana amin'ireo mpitsidika
Ity dia iray amin'ireo hetsika bot izay voarakitra an-tsoratra sy be mpampiasa indrindra nisafidy. Ny fizotrany dia mety haka enta-mavesatra amin'ny asa be dia be eny an-tananao ary afaka manomana anao amin'ireo tombontsoa ho azonao.
Ny marketing nomerika dia nanova ny fomba fifandraisan'ny marika amin'ny mpanjifa voalohany.
Tsy fifankahazoana intsony ny serasera mifanatrika, ary ny orinasa dia nametraka ny heviny voalohany tamin'ny Internet tamin'ny alàlan'ny fomba fijerin'ny tranonkalany sy amin'ny alàlan'ny atiny hita eo aminy.
Rehefa tonga voalohany amin'ny tranokalanao ny mpanjifa, dia tsy mila ny sary sy ny estetika marina fotsiny izy ireo, fa mila ny fampahalalana mifandraika rehetra omena azy ireo koa.
Raha fintinina dia mila valiny momba ny vokatra sy ny serivisy atolotrao izy ireo, miaraka amin'ny antsipiriany momba ny fihenam-bidy na promo mifandraika amin'izany. Ny tsy fahafahanao manome azy ireo ny valiny dia midika fa very mpanjifa ianao.
Manampy ny rehetra mety ho mpanjifa dia laharam-pahamehana izay mety ho sarotra ny mitazona sy mitantana rehefa manana ekipa mpivarotra na mpanohana kely ianao.
Ary koa, ny ekipanao dia hanana ora fiasana voafantina, aorian'izay ny mpanjifa dia tsy hisy olona afaka hamaly ny fanontaniany.
Ny fanolorana ny mpiasao amin'ny ora fiasana samihafa dia midika fa tsy maintsy ahenanao ny mpiasa misy amin'ny fotoana iray.
Hanakana ny fahombiazany izany ary hahatonga anao tsy mahay mitantana ny fidiran'ny mpanjifa mitady hametraka fanontaniana.
Mety hahagaga ny ankamaroan'ny mpivarotra amin'izao fotoana izao izany, kanefa ny mpanjifa dia mankasitraka resaka mivantana izay mamaly ny fanontaniany.
Ny fanadihadiana natao vao haingana nataon'ny Econsultancy dia nahatsikaritra fa saika 60 isan-jato aleon'ny olona ny chat mivantana amin'ny tranonkala iray.
Azonao atao kokoa ny manao hafatra amin'ny alàlan'ny bot ho lasa olona kokoa amin'ny alàlan'ny fiasa amin'ny valiny.
Mametraha fanontaniana ary mamolavola valiny mifanaraka amin'ny marikao sy ny lazan'ny vokatra.
Ny olona dia tsy dia mifanerasera amin'ny bot mahery izay tsy dia mandray azy ireo. Azonao atao ny mandray ny botanao kokoa amin'ny alàlan'ny fanomezana azy sary mombamomba sy sary aseho.
Ireo fanampiana ireo dia hanatsara ny fifandraisana eo amin'ny bot sy ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny fampifandraisana azy bebe kokoa.
Raha miresaka momba ny fifandraisana, Sepbot's chatbot dia ohatra tsara amin'ny bot iray izay mifanerasera tsara amin'ny mpanjifa. Ny feo ampiasain'ny bot dia manintona ary manampy ny mpanjifa hamehezana ny fifanarahana nataony.
Antony 2: Mampiasà bot mba hanasivana amin'ny alàlan'ny fitarihanao
Ny fitantanana fitarihana dia asa sarotra tantanan'ny mpitantana sy ny ekipa marketing. Ny dingana iray manontolo dia miankina amin'ny fahatsapanao toetra sy ny fitsaranao.
Amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny ekipa marketing anao dia tokony ho azonao antoka fa manana ny antso tsara ianao amin'izay mety hitohizan'ny fikirizana hatrany ary iza no hilatsaka.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana chatbots, azonao atao ny manampy antoka bebe kokoa amin'ireo antso ireo. Mety hita fa diso ny faniriana voajanahary, saingy ny analytics tanterahin'ireo botsika chat hahafenoana fitarihana dia tena tsy dia marina loatra.
Alao an-tsaina ny mpanjifa vaovao tonga amin'ny tranokalanao an-tserasera. Ny sasany mety miantsena amin'ny varavarankely, ny hafa mety tena liana.
Ny fitazonana ny dinamika sy ny demografikan'ny mpanjifanao dia azonao atao ny mamolavola lisitry ny fanontaniana mahaliana hamaritana raha ao anatin'ny tandroka fivarotana na tsia.
Ny valiny omena an'ireo fanontaniana ireo dia hanampy anao hamantatra izay nitarina tokony harahina.
Misy bots voalamina azo anaovana ity asa ity ho anao. Manampy amin'ny fanomanana fanontaniana ireo botika ireo ary avy eo mamakafaka ny valiny omena azy ireo hahitana raha azo atao ny mitarika na tsia. Driftbot avy amin'i Drift no safidy voalohany eto raha mitady an'ity karazana rindrambaiko ity ianao.
Na dia afaka manao asa tena tsara aza ny botika amin'ny fikajiana sy fikolokoloana mpitarika, ny fomba tsara indrindra hitantanana ny fizotrany dia amin'ny fampidirana olona iray amin'ny faran'ny fifanarahana.
Ny fomba tsara indrindra handrosoana dia ny famelana ny bot bka hikolokolo sy hahafeno fepetra hitarika ary avy eo hanana dingana mahaolona rehefa akaiky ny fifampiraharahana.
Ny fizotrany dia azo ahodina hamaritana ny paikadinao fivarotana nomerika amin'ny fotoana ho avy. Mora ary hijinja valisoa ho anao.
Antony 3: Ampiasao ny bot toy ny fomba ilazana azy manokana ny traikefan'ny mpampiasa
Ny fikarohana vao haingana dia nahita an'izany 71 isan-jato amin'ny mpanjifa rehetra dia aleony ny paikady fivarotana manokana.
Raha ny marina dia miaina sy maty ny mpanjifa amin'ny maha-izy azy manokana, satria io dia mampisongadina azy ireo. Nandritra ny taona maro dia nivarotra izay hitany fa mety ny marika, na izany aza dia niova ny onja ary tonga ny fotoana hamaritan'ny mpanjifa izay amidy sy amidy azy ireo.
Aza adino ny fikoropanan'ny mpanjifa manoloana ny personalization dia tokony horaisinao ho anao ny hanome azy ireo an'io fiheverana io. Amin'ny fampiasana bots, azonao atao ny manome valiny mifantoka amin'ny mpanjifa amin'ireo mpitsidika anao.
CNN dia ohatra iray amin'ny fantsom-baovao avo lenta izay mandefa feed vaovao namboarina ho an'ireo mpampiasa samihafa mifototra amin'ny tombontsoany sy ny safidiny.
Miteraka habaka tsara izany ary manampy ny mpanjifa hiantehitra amin'ny mpanome vaovao amin'ny vaovao rehetra mifandraika amin'izy ireo.
Structure dia vahaolana AI mitarika an-tserasera izay manampy ny ekipa mpivarotra trano sy mpivarotra ary mpandraharaha hampivelatra valiny manokana ho an'ny mpanjifany.
Ny chatbot ambanin'ny Structure dia mitondra ny anarana hoe Aisa Holmes ary miasa amin'ny maha-mpivarotra azy. Aisa Holmes dia mamantatra ireo mpanjifany ary mamaly ny fangatahany amin'ny endriny manokana.
Antony 4: Mampiasà Bot ho an'ny serasera haino aman-jery sosialy mahomby
Azonao atao koa ny mampiasa bot amin'ny media sosialy hamalianao sy hifandraisanao amin'ny mpanjifa miaraka amin'ny fanoloran-tena sy ny fanaingoana toa ny nataonao tao amin'ny tranonkalanao.
Betsaka ny chatbots azo ampiasaina hanatsarana ny hafatrao amin'ny Slack sy Facebook Messenger. Ny botsan'ny media sosialy dia ampiasaina indrindra ho an'ny taranaka mitarika, ary manatanteraka tsara izany tanjona izany.
Antony 5: Ampiasao ny bot mba ho famaritana ny demografika
Manolotra fomba fifandraisana be dia be ho anao ny bot mba hahazoanao ny demografika takiana amin'ny mpanjifanao, fa tsy mangataka azy ireo hameno endrika lava sy mankaleo.
Ny bot dia mifampiresaka amin'ny mpanjifanao amin'ny fomba mahazatra ary mamorona ny vaovao mifandraika amin'ny demografika.
Ity fampahalalana ity dia ampiasaina hanolorana azy paikady fivarotana manokana ho an'ny mpanjifa. Ireo paikady mivarotra ireo dia mety ho fomba tsara hitondrana mpanjifa vaovao amin'ny marikao.
Chatbot dia manome toerana azo antoka ho an'ny mpanjifa maro izay ahafahan'izy ireo mizara vaovao mifandraika amin'ny demografika, nefa tsy mahatoky tena momba izany.
Azonao atao koa ny mampiasa an'io fotoana io hitondrana mpanjifa vaovao sy hahazo angona mifandraika amin'ny demografika avy amin'ireo taloha.
Amin'izao fotoana izao dia antenainay ianao hahatakatra ny maha-zava-dehibe ny chatbots sy ny fomba ahafahanao mampiditra azy ireo ao anatin'ny tetikady marketing. Ny varotra niomerika dia ny fanaovana tsinontsinona sy ny fifamatorana amin'ny mpanjifanao.
Ny botsan'ny chat dia manome anao an'io fotoana io, satria avelany hizaha ny faravodilanitra izay mety ho lavitra anao loatra.
Ny ekipa mpivarotra dia afaka miara-miasa amin'ny botika mba hamoronana paikady marketing nomerika lehibe.
Ny serivisy botsika interactive sy 24 ora dia hiasa tsara miaraka amin'ny fahaizan'ny mpiasa olombelona anao. Amin'ny alalàn'ity amalgam ity dia hahafahanao mijinja valisoa amin'ny fahafaha-mivarotra bebe kokoa sy ny automatisation marketing.
Ianao ve mitady ny manandrana ny vintanao amin'ny fampidirana bot ao anatin'ny tetikady marketing?
Raha eny, dia omeo hevitra eto ambany mba hampahafantaro anay ny fomba ahafahan'ny teknikanay manampy anao amin'ny dia ho avy.
Tags: b2bbotschat botstaratrafmfahaizana mitarikamitarika mahafeno fepetrafahaiza-mitarika